Mpanamboatra bracelet vita amin'ny perla | China Pearl Bracelets Factory ary mpamatsy
Fehiloha Voahangy Baroque Fresh Water Luster tsara tarehy, PB001
Lavorary amin'ny fanomezana fanomezana: Ireo perla kanto ireo dia manome fanomezana tonga lafatra ho an'ny Fetin'ny Reny, Andron'ny mpifankatia, Krismasy, Hanukkah, Andro nahaterahana, June Birthstone, Fifanambadiana, Ampakarina, Ampakarina na fizarana diplaoma ho an'ny vehivavy, zatovo, ankizy, olon-dehibe, zanakavavy, zafikely, sakaiza, vady, fiancee na io vehivavy manokana io.
8mm Fehin-kibon'ny Voninkazo Voninkazo Fotsy Vatofotsy, PB002
Ny fehin-tànana vita amin'ny perla fotsy dia firavaka mahazatra izay tsy dia araraotina loatra amin'ny fotoan-dehibe na isan'andro.
7mm Misc loko eo akaikin'ny boribory farihy rano mangirana faribolana, fehin-tànana fotsy mavokely volomparasy, PB003
Manampia fahafinaretana amin'ny akanjo miaraka amin'ny fehin-tànantsika mamirapiratra amin'ny avana amin'ny tonony perla. Ity firavaka maro loko ity dia tsara ho an'ny fiantsenana miaraka amin'ny namana na amin'ny alina eny an-tanàna. Mety tsara amin'ny fametahana amin'ny braseleer hafa mba hanomezana an'io endrika bohemia io.
Bolo vita tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana, fehiloha tsara tarehy ary fehin-tànana mamelatra rano velona, ​​PB004
Ny firavaka dia azo namboarina; raha tianao ny hitanisako ireo variana na fangaro hafa, na lehibe kokoa noho ny habetsaky ny lisitra ny habeny dia miangavy anao hamela hafatra ho ahy. Ny asa rehetra dia vita tanana sy aingam-panahy avy amin'ny ranomasina!
Voahangy ranomamy & fitaratra misy vakana boribory 3 Row, Silver Sterling, PB005
Ny bangle fehin-tànana dia voaravaka endrika tsara tarehy mamirapiratra ary azo ovaina ny refy iray mifanaraka amin'ny rehetra. Mora apetraka ary esorina.
3 laharana boribory perla vita amin'ny gadona ivoara Fotsy fehiloha rano Bangle Fehin-tànana Cuff Coil ho an'ny Ampakarina Ampakarina, Sterling Silver, PB006
Sombin-javatra misy sosona telo an'ny Bangladesy. Ny perla dia tantaram-pitiavana ary ny mitafy ireo irery dia azo antoka fa ho ampy. Raha mikarakara ny manambatra azy ireo amin'ny bracelet hafa ianao dia mifalia.
5 laharana boribory perla vita amin'ny gadona ivoara Fotsy fehiloha rano Bangle Fehin-tànana Cuff Coil ho an'ny Ampakarina Fampakaram-bady, Sterling Silver, PB007
Fehin-kofehy vita amin'ny kofehin-kibo dimy mahafinaritra, fehin-kofehy voajanahary voajanahary 4-9mm fonosana tady voafafa. Mety amin'ny fehin-tanana rehetra. Toetra tena tsara, voahangy miloko fotsy mahafatifaty, volondavenona, vorombola na loko namboarina ihany koa.
2 Andalana boribory Voahangy Voahangy Voninkazo Voninkazo Voahangy Fehin-kibo Fehin-kibo ho an'ny Ampakarina, Sterling Silver, PB008
Fehin-kofehy vita amin'ny tariby roa kofehy mahafinaritra, fonosana fitadidy perla voajanahary voajanahary 4-8mm. Mety amin'ny fehin-tanana rehetra. Toetra tena tsara, voahangy miloko fotsy mahafatifaty, volondavenona, vorombola na loko namboarina ihany koa.
Aaa Voahangy Rano, Voahangy marina anaty rano velona, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Kavina Stud Perla, Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Kavina fampakaram-bady,